Uyisebenzisa njani iYouTube kwintengiso ye-Intanethi? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 9, 2021 0 IiCententarios 376
I-YouTube liqonga levidiyo elinamathuba amahle okubekwa kwi-Intanethi, yiyo loo nto inomdla okhethekileyo kwabo bafuna ukwenza isicwangciso esifanelekileyo sokuthengisa. urhwebo yedijithali yemveliso okanye uphawu. Ukongeza, kulula ukubeka uluhlu lwamagama aphambili ngokuthe ngqo kwi YouTube, yiyo loo nto kubaluleke kakhulu ukuphucula intengiso.
Kwelinye icala, kubalulekile ukuba kungabikho khuphiswano luqilima ngokunxulumene ne umcebisi, Umgangatho onokutshintsha kwikamva, kuba ayingabo bonke abantu abazimisele ukungena phambi kwekhamera ngezizathu ezahlukeneyo. Nangona kunjalo, indibaniselwano enobulumko yemifanekiso kunye nezandi zinomtsalane kubo bonke abasebenzisi kwaye zibamema ukuba babhalise.
Wena Tube unceda ukusasazwa komxholo obonakalayo
Ngaphandle kwamathandabuzo, iqonga le-You Tube lisetyenziswa ngakumbi yonke imihla ngenxa yesikhundla sayo sokusasazeka okuphezulu qulatho ezibonwayo kwaye yinto enokuqondwa ngokulula, kuba namhlanje kukho iiarhente zentengiso ezisebenzisa izikripthi kunye neengcali bafunwa Ukuhlela iividiyo ukubanika ukubonakala kobuchwephesha kwaye, ngamanye amaxesha, kunokubiza utyalo-mali oluphantsi.
Kubantu abaninzi, ukuqala okanye ukukhuthaza ijelo le-YouTube sisigqibo esiliqili esihle esinokuzisa iziphumo ezilungileyo kwikota ephakathi. Ukwazi izibonelelo zayo kwintengiso kufuneka ubhalise kwaye uqale ukwazi i-portal kunye nokusebenza kwayo. Umbono kukukhuthaza iimveliso okanye iinkonzo ukuze bafumane ukugcwala ngakumbi kwaye bandise amathuba negocios.
Impembelelo zeYouTube kwihlabathi lentengiso
Ukuqinisekisa ezi zinto zilungileyo kwintengiso, kufuneka ukhangele isihloko esinye kumaqonga: IGoogle kunye nawe Tube. Kwelinye icala, kufuneka ubhaqe iimpawu ze abasebenzisi, abo bathambekele ekutsaleni ngakumbi ekusetyenzisweni komxholo obonwayo, esisibonelelo esibaluleke kakhulu kwabo basebenzisa iYouTube ngeenjongo zokukhulisa ishishini.
Ezinye iingcali zicinga ukuba ayizukufuneka kuphela ukuba neakhawunti kunye nejelo kwi-You Tube, kodwa iya kuba yi Ukuphinda Kubalulekile njengesixhobo urhwebo wentsholongwane, kunye nevidiyo Ukufaka uphawu kunye nokubekwa. Ukwenza iividiyo ezilungileyo zeYouTube mihla le, ngeveki okanye ngenyanga kuya kukuvumela ukuba ukhuthaze ngokufanelekileyo naliphi na ishishini kwaye ulincede likhule.
Ezinye izibonelelo zeYou Tube kwishishini
Phakathi kwezibonelelo ezinikezelwa yiYouTube kwihlabathi lentengiso yedijithali, ukukwazi kwayo ukubeka isikhundla amagama aphambili. Ukongeza, umlinganiso obonakalayo weqonga uvumela ukunyuka kwenqanaba lokuthengisa, ukuhambisa ukuzithemba eluntwini kwaye ubonise ngcono imveliso okanye inkonzo ofuna ukuyithengisa. Ezi zibonelelo zixatyiswa kakhulu ngoosomashishini abaninzi.
Ngokunjalo, intengiso eqongeni likaYouTube zitshiphu kunezinye iinkampani ezibonelela ngeenkonzo zentengiso, ukuvumela umsebenzisi ukuba alawule ngokwaneleyo ukusasazwa kwemifanekiso nomculo xa bekhuthaza ishishini labo intanethi. Ukunxibelelana nabanye abasebenzisi ababelana ngezinto ezifanayo kunokuba luncedo kulo naliphi na ishishini.
1 Wena Tube unceda ukusasazwa komxholo obonakalayo
2 Impembelelo zeYouTube kwihlabathi lentengiso
3 Ezinye izibonelelo zeYou Tube kwishishini